9 Jestha 2074 Tuesday प्रतिकृया दिनुहोस
झापा । लिचीको दाना अड्किएर आज झापामा एक बालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा कनकाई नगरपालिका–१ प्रजापति निवासी टेकनारायण बुढाथोकीका तीन वर्षीय छोरा रोशन रहेको पशुपति प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक खेम कार्कीले जानकारी दिए । ...विस्तृतमा पढ्नुस्
स्थानीय तह थप गर्दा आयोगलाई व्यवस्थापनमा चुनौती
बाँके । निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले स्थानीय तह थप गर्दा आयोगलाई व्यवस्थापनमा चुनौती भएको बताएकी छन् । असाधारण समयमा असाधारण चुनौती खेपिरहेको आयोगलाई सरकारले संख्या बढाएर थप चुनौती दिएको टिप्पणी गरेकी उनले यसबारे आयोगले आफ्नो ...विस्तृतमा पढ्नुस्
कसरी चल्यो काठमाडौंमा भूतको हल्ला ? अनि के भयो ? हेर्नुस् भिडियो
काठमाडौं । राजधानीको अत्यन्तै व्यस्त क्षेत्र मानिने कमलादीस्थित एक घरमा सोमबार दिउँसो एक्कासी भूतको हल्ला चल्यो । हल्ला चले लगत्तै त्यहाँ भीड मात्र जम्मा भएन वरपरकाले आ–आफनो पसल नै बन्द गरे । र, घटनास्थल पुगेको ...विस्तृतमा पढ्नुस्
एकै दिन १ सय ७ आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा
सोलुखुम्बु । एकै दिन १ सय ७ आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल भएका छन् । पछिल्लो पाँच दिनमध्ये सोमबार सबैभन्दा धेरैले सफल आरोहण गरेका हुन । एक साताअघिबाट सुरु भएको आरोहण क्रममा हालसम्म २ सय ...विस्तृतमा पढ्नुस्
प्रहरीको गाडी दुर्घटना, महिला प्रहरीको मृत्यु
सुर्खेत । कालीकोटबाट सुर्खेत आउँदै गरेको प्रहरीको गाडी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परि रुकुम घर भएकी प्रहरी जवान तारा चन्दको मृत्यु भएको हो । २५ प्रहरी घाइते भएका छन् । ...विस्तृतमा पढ्नुस्
८६ बर्षीया हजुरआमाको जिम्मामा एउटा पुरै गाउँ
बझाङ । बुधबार दिउँसो १ बजे करिब ४५ परिवारको बसोबास रहेको सुर्मा गाउँपालिकाको थुकुन्डा गाउँका प्रयाः सबै घरका ढोकामा ताला झुन्डिएको थिए । ३ सय ५० जनाको बसोबास रहेको गाउँमा मध्यान्हमा पनि मानिसको चालचुल थिएन । ...विस्तृतमा पढ्नुस्
Page 292 of 805« First«...102030...290291292293294...300310320...»Last »